Doro Calculator anobvumira kuti imi overenga ropa doro wevasungwa dhigiri zvichienderana pamusoro uwandu uye mhando vakadhakwa doro, wako pabonde, uremu, uye zvakadini nguva yakapfuura pashure kunwa yenyu. Uyewo doro Calculator regai kuziva kana wako anogona kutyaira motokari nedzimwe ropa doro tigutsikane munyika dzakasiyana.
Ko iwe kunwa sei zvikuru?
milliliters hombodo 0.33l hombodo 0.5l hombodo 0.75l kwepfuti 50ml wineglasses 0.2l FL oz
Doro Doro Strong Martini Doro paguva rehama yavanoremekedza Whiskey Waini Waini Strong Bhurandi Doro Rum Tequila Vodka mwe
Uri: Mukono Chikadzi
Your uremu: 70makirogiramu 80makirogiramu 90makirogiramu 100makirogiramu mwe 50makirogiramu 60makirogiramu 70makirogiramu 80makirogiramu mwe
Hours akapfuura: 0f 30min 1f 2f 3f 4f 5f 6f mwe f
Afuganisitani Aisirendi Ajendina Angora Arubha Arubhaniya Arujeriya Azabhaijani Bhabhadhosi Bhahareni Bhangiradheshi Bharugeriya Bherarusi Bherizi Bhoziniya neHezegovhina Bhuraziri Bhurundi Bhutani Botswana Chire E Savhadho Eritiriya Esitoniya Fiji Gambiya Ghana Gibhurata Gini Guernsey Guyana Gwatemara Hangari Hondurasi Hong Kong Ijipita India Indonezhiya Iraki Ithiyopiya Jamaika Japani Jersey Jodhani Kambodhiya Kanadha Kenya Khazakisitani Kijisitani Kiroshiya Kiyuba Kosita Rika Kuweti Kwata Marawi Marazhiya Maruta Mekisiko Mongoriya Morishiyasi Mozambiki Naijeriya Namibhiya Neparo Nikaraguwa Noweyi Omani Pakisitani Panama Paragwayi Peru Philippines Porendi Raibheriya Rashiya Rativhiya Rebhanoni Resoto Ribhiya Rituaniya Romaniya Samoya Saudhi Arabhiya Sikwazirendi Singapowo Sirovhakiya Siwidheni Solomon Islands Sudhani Tairendi Tajikisitani Tekimenisitani Tonga Trinidhadhi neTobhago Tunisiya Uganda Ukireni Urugwayi Uzebhekisitani Vanhwatu Yemeni Zambia Zimbabwe Zimbabwe ari Bermudas dzemuCayman Islands kuDominican Republic
Ropa doro kugutsikana kana ropa doro wevasungwa (Bắc) ndiro wevasungwa doro muropa. Zvinonzi Kazhinji akayera sezvo vakawanda pa vhoriyamu. Alcohol Calculator anopa imwe inofungidzirwa kukarukureta, yenyu chaiyo ropa doro wevasungwa kunoenderana zvakasiyana-siyana zvimwe zvinhu, kufanana akatodza vabereki vawo, pachake utano, uye achangopfuura zvokudya zvinodyiwa.